Fitomboana amin'ny fiaraha-miasa
Mba hanarenana indray ny jono sy hamerenana amin'ny laoniny ny fiainana an-dranomasina, dia manorina fifandraisana maharitra amin'ireo mpiara-miombon'antoka mitovy hevitra izay efa miara-miasa akaiky amin'ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka.
Fotodrafitrasa fanohananay − fanofanana, fanampiana ara-teknika, rafitra angon-drakitra, toro-hevitra ary famatsiam-bola − manampy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny hazan-dranomasina bibidia, mamorona tontolo iainana salama sy manatsara ny fiveloman'ny mpanjono mahazatra.
Miara-mamolavola, mandanja, manamafy ary manohana ny fitantanana sy ny fitantanana ny jono eo amin'ny fiarahamonina isika.
Isan-taona, miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka bebe kokoa sy mpanjono bebe kokoa izahay. Tamin'ny taona 2003, nanomboka tamina vondrom-piarahamonina iray tany atsimo andrefan'i Madagasikara. Ankehitriny, miasa manerana ny firenena 14 manerana ny tany mafana izahay, miaro mihoatra ny 21,089 km2 ny fonenan'ny ranomasina tena ilaina ary misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona maherin'ny 754,000.
Nanohana ny zo sy fitaovana hanarenana ny fanjonoana ny mponina any amin'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka ambany fidiram-bola.
Olona mahazo tombony amin'ny toerana fanjonoana azo antoka izay voarara ny jono indostrialy manimba.
Miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka eto an-toerana izahay mba hanamafisana ny fitantanana an-dranomasina eo an-toerana sy hamerina ny fiainan'ny ranomasina.
Vakio ny paikadinay 2025